Edward Hopper dia manana fahatsapana hafa lehibe kokoa amin'izao andron'ny coronavirus | Famoronana an-tserasera
Edward Hopper no mpanakanto mpanakanto mitantara izany, raha efa loharanom-aingam-panahy ho an'ireo mpanatontosa sarimihetsika ary iray amin'ireo solontena lehibe indrindra tamin'ny taonjato faharoapolo, ankehitriny dia misy dikany hafa manan-danja kokoa ary mifandraika amin'ny andro tsy maintsy iainantsika amin'ny vanim-potoanan'ny coronavirus.
ny Tendrombohitra sy tanàna mitokana Misolo tena tsy misy an'ireny sarin'ahita mahita olona marobe mitehaka avy eo am-baravarankely ireny izy ireo, fa miaraka amin'ny alahelo kosa mifanalavitra.
Araka ny efa nolazain'ny sasany, rehetra izao soloina sary hosodoko isika ao amin'ny hosodokon'i Hopper. Nifanalavitra toy ny vehivavy tao amin'ny "maraina Masoandro" nipetraka teo am-pandriany nijery teo am-baravarankely, na iray hafa avy teo am-baravarankely nijery tamin'ny endriny mitovy.
Azontsika atao ny manohy mamaritra ireo sary hosodoko maro toy ny ilay mpiasan'ny fivarotana irery, vehivavy irery ao amin'ny teatira sarimihetsika na olona mifanalavitra eo amin'ny latabatra amin'ny trano fisakafoanana. Sehatra maneho ny iray amin'ireo vokatra ratsy indrindra amin'ity areti-mandringana ity izay mamongotra ny fifandraisana mivantana eo amin'ny olona.
Izany indrindra no ampianarin'i Hopper antsika amin'ny asany sary. Mpaka hosodoko iray teraka tany New York tamin'ny taona 1882 ary iza nanao ny maha irery ny asan'ny fiainany. Hopper koa dia mamela antsika hamaly fa raha esorina amin'ny fahalalahana ankehitriny ny fahalalahantsika dia ny fanirery irery ihany no mamela antsika.
Manirery izay heverina fa hianarantsika hanome lanja ny ampahany mifanaraka amin'ny fandraisana ny fiarahan'ny olona tsy fantatsika, izay mijery amin'ny maso hafahafa na ny famihina tampoka ataon'ny olona iray izay miaraka amintsika nefa tsy mitady zavatra hafa ankoatry ny ankamaroan'ny olombelona. Hopper dia manome antsika fahitana hafa amin'ny asany Amin'izao fotoanan'ny coronavirus izao sy ny areti-mandringana izay nanery anay ho ao an-tranonay toa ny fort. Aza adino ity Mazava ho azy fa amin'ny Hopper avy any Thyssen Museum.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sary hosodoko Hopper dia misy dikany lehibe kokoa amin'ny vanim-potoana coronavirus
Miasa amin'ny loko miaraka amin'ny Adobe Color